Why noise is bad for your health — and what you can do about it | Mathias Basner – Calatorii Spirituale
Translator: Ko Ko Oo
Reviewer: Myo Aung ကြားရလားဟင်။ အဲ့ဒါ ဘာလဲ သိပါသလား။ တိတ်ဆိတ်ခြင်းဗျ။ တိတ်ဆိတ်ခြင်းရဲ့အသံ တဲ့။ Simon နဲ့ Garfunkel
ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းပေါ့။ အခုခေတ်မှာတော့ တိတ်ဆိတ်ခြင်းဆိုတာ
တကယ့်ကို ရှားတဲ့ အရာပါ။ အဲဒါအတွက် ကျွန်တော်တို့တတွေရဲ့ အဖိုးတန် ကျန်းမာရေးနဲ့
ပြန်ပေးဆပ်နေရသလို ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ ကံကောင်းချင်တော့ ဒီအခြေအနေကို
ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးချင်းစီမှာရော အဖွဲ့အစည်းတွေဆီမှာရော
ကျုပ်တို့ ကျန်းမာရေးကို ပိုကာကွယ်ပေးဖို့၊ တိတ်ဆိတ်ခြင်းရဲ့ အသံရဲ့
အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဆူညံခြင်းဟာ အကြားအာရုံကို
ထိခိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်း အားလုံးသိပြီးသားပါ။ ပွဲတွေ ဘားတွေက ပြန်လာတဲ့အခါ ခင်ဗျားတို့နားတွေ အူနေတတ်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားရဲ့ နားတော့ ဒဏ်ထိနေပြီဆိုတာ
ရာသက်ပန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်ဗျာ။ သို့သော် လူတွေမသိသေးတာက
ဆူညံသံဟာ နားကျန်းမာရေးအပြင် အခြားကျန်းမာရေးတွေကိုပါ
ထိခိုက်နိုင်တာကိုပါ။ လူသိနည်းတယ် ဆိုပေမဲ့ အကြားအာရုံ ထိခိုက်သလိုပဲ
ဒါတွေက သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ကဲ ဆူညံသံကို
ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်မလဲ။ ဆုညံသံ ဆိုတာကို
မလိုအပ်သောအသံ လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆူညံသံအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆူညံသံပါ ပါ၀င်ပါတယ်။ အသံတစ်ခုဟာ ခင်ဗျားအတွက်
မလိုအပ်ဘူးဆိုရင် ဆူညံသံ ဖြစ်လာပြီပဲ။ ဥပမာ ရော့ခ်ဂီတပွဲတစ်ခု ဆိုပါတော့ ပွဲသွားတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာ
၁၀၀ ဒက်စီဘယ်လ် လောက်ရှိနေတဲ့ အသံကို ကြားနေရပေမဲ့၊ ဆူညံသံလို့ သူ မသတ်မှတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင် ဒီပွဲကို
လိုလိုလားလား ပိုက်ဆံပေးလာကြည့်တာ၊ ဘယ်လောက်ကျယ်ကျယ်
သူ့အတွက် ဆူညံသံ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီပွဲနဲ့ မလှမ်းမကမ်းက
အိမ်တစ်လုံးမှာ လူတစ်ယောက် စာဖတ်နေတယ်ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီအသံကြောင့် သူဘယ်လိုမှ
စာကို အာရုံစိုက်လို့ မရဘူး၊ သူကြားနေတဲ့ သီချင်းသံဟာ
ပွဲကျင်းပတဲ့နေရာမှာထက် တိုးနေပေမဲ့၊ သူ မကြိုက်တဲ့ အသံမို့
ဒါဟာ သူ့အတွက်တော့ ဆူညံသံ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါဟာ ရေရှည်မှာ
သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူးဗျ။ ဒါဆို တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတွေ လိုအပ်တယ်ပေါ့။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆူညံသံဟာ
အကြားအာရုံအပြင် တခြားအများကြီး ထိခိုက်စေနိုင်လို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုဆိုတာကို
အခုခေတ်မှာ ရှာရသိပ်ခက်သွားပြီဗျ။ ကားတွေက များသထက်များလာ၊ လူတွေက များသထက်များလာ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊
နေရာအနှံ့က အဲကွန်းတွေ၊ သစ်ပင်ရိတ်စက် ဘာစက် ညာစက်၊ ရှိုးပွဲသံ၊ သီချင်းသံ၊ ကက်ဆက်သံတွေ၊ အိမ်နီးနားချင်းတွေဆီက ဆူညံသံတွေ။ (သက်ပြင်းချသည်) ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ဆူညံသံတွေကြောင့် နှစ်စဉ်
ကျန်းမာတဲ့ လူ့သက်တမ်းတွေထဲက နှစ်ပေါင်း ၁.၆ သန်းလောက်
ဆုံးရှုံးနေသတဲ့ဗျ။ ဒါတောင် ဥရောပနိုင်ငံအချို့ပဲ
ဆူညံသံဟာ လူတွေရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို
စကားကို လိုတာထက် ပိုကျယ်ကျယ် ပြောရမယ်။ တခါတလေ ပြောနေတာကို
ရပ်လိုက်ရမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်
နားလည်ဖို့ ခက်လာမယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ လေ့လာမှုတွေအရ ဆူညံတဲ့နေရာမှာ
ကျောင်းတက်ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ တခြားကျောင်းသားတွေထက်
စာပိုညံ့နေတတ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အရေးကြီးတဲ့တွေ့ရှိမှုကတော့ အချိန်အတော်ကြာကြာ
ဆူညံသံတွေနဲ့ ထိတွေ့နေရသူဟာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။ ဆူညံသံဟာ စိတ်ဖိစီးစေပါတယ်။ ဆူညံသံကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အဒီနလင်နဲ့ ကော်တီစော
သွေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ နဲ့ သွေးကြောတွေရဲ့ ပုံစံကိုပါ
ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဆူညံသံကို တစ်ညလေးခံရတာနဲ့တင်
ဒီကိစ္စတွေ စဖြစ်နိုင်ပြီဗျ လေ့လာမှုတွေအရ ဆူညံသံတွေဟာ သွေးတိုး နှလုံးရောဂါ လေဖြတ်ခြင်းတို့နဲ့
ဆက်စပ်နေတယ်ဗျ။ ရာခိုင်နှုန်း နည်းသေးတယ် ဆိုပေမဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး
ပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆူညံသံဟာ
နေရာတိုင်း ရှိနေတယ်လေ။ လူတိုင်း နေ့စဉ် မလွဲမသွေကြုံနေရတဲ့ အရာပဲ။ အမေရိကန်မှ သုတေသနတစ်ခုက
ဘာပြောသလဲဆိုတော့၊ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ကြားနေတဲ့ အသံတွေကို ငါးဒက်စီဘဲလ်လောက်စီ လျှော့နိုင်မယ်ဆိုရင်၊ ဆူညံသံကြောင့်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါတွေ
အတွက် ကုသစရိတ် ဒေါ်လာ ၃.၉ ဘီလီယံကို
နှစ်စဉ် ချွေတာမိမယ် တဲ့ဗျ။ ဆူညံသံဟာ ကင်ဆာ၊ ဆီးချိုနဲ့ အ၀လွန်ရောဂါတွေနဲ့လည်း ဆိုင်သေးတယ်နော်။ တိတိကျကျ သက်သေပြဖို့တော့
ခက်သေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ နောက်ထပ် ပြဿနာတစ်ခုကတော့ အိပ်မပျော်ခြင်း ပါပဲ။ အိပ်စက်ခြင်းဟာ
နောက်တစ်ရက် ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာနိုးထပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့
သိပ်ကို အရေးပါတဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲ။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အိပ်ခန်းတစ်ခုဟာ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်နိုင်မှုရဲ့ လက္ခဏာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြားအာရုံဟာ ကျွန်တော်တို့ အိပ်နေတာတောင် နိုးကြားစွာ
အလုပ်လုပ်နေတဲ့အာရုံခံအင်္ဂါတွေပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဆူညံနေရင် အိပ်မောကျဖို့
အချိန်ပိုယူရနိုင်သလို ညကြီးမင်းကြီး နိုးလာစေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်နေစဉ် သဘာ၀အတိုင်း ဖြစ်ရမယ့် သွေးပေါင်ကျမှုကို ဟန့်တားစေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အိပ်ရေးမ၀တာတွေ၊ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကနေ
လတွေ နှစ်တွေနဲ့ချီပြီး ကြာလာပြီဆိုရင်တော့၊ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့
နှလုံးရောဂါဖြစ်လာဖို့ များနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ
အိပ်ရေးမ၀တာကို သတိမထားမိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိပ်နေစဉ်မှာ
ဘာမှ မသိလို့ပါပဲ။ အရင်က
ဆူညံသံတွေဟာ အိပ်စက်ခြင်းကို ဘယ်လို ထိခိုက်သလဲဆိုတာ
မနက်ခင်းမှာ နိုးထလာသူတိုင်းဟာ အိပ်ရေး၀လိုက်တာ
တချိုးတည်းအိပ်သွားတာပဲ၊ တစ်ရေးမှ မနိုးဘူး လို့
ပြောနေကြပေမဲ့၊ တကယ်တမ်း စက်တွေနဲ့ စမ်းတဲ့အခါမှာ၊ သူတို့ မကြာခဏ နိုးနေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီလို နိုးနေတာလေးတွေဟာ
ခဏတာလေးစီသာ ဖြစ်လို့၊ သူတို့လုံး၀ မသိရှိ မမှတ်မိပေမဲ့၊ သူတို့ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်လို့
ပြောမရပါဘူး ကဲ ဒါဆို ဘယ်အချိန်မှာ ဆူတယ်လို့
ပြောင်းလဲနေပြီဆိုရင်၊ ဒါကို ဆူညံနေပြီလို့ ပြောလို့ရပြီ။ ဥပမာ – ခင်ဗျာ့ပုံမှန်အသံထက်
ပိုကျယ်ကျယ် ပြောနေရတာတွေ၊ တီဗွီသံကို ပိုပြီး မြှင့်လာရတာတွေ၊ အပြင်ကအသံ မကြားရအောင်
တံခါးကို ပိတ်မယ်၊ အောက်ထပ်ကို ပြောင်းအိပ်မယ်၊ အသံကာတဲ့ နံရံတွေ၊ ဘာတွေ တပ်မယ်
စသဖြင့် ပေါ့ဗျာ။ လူတွေဟာ ဆူညံသံနဲ့ ဝေးရာကို
ပြောင်းရွှေ့တတ်ကြတယ်။ လူတိုင်းတော့ မလုပ်နိုင်ဘူးဗျ။ ဒါဆို ဆူညံသံတွေနည်းလာဖို့၊
ပတ်၀န်းကျင် သာယာဖို့၊ ကျန်းမာရေးတွေပိုကောင်းလာဖို့၊ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ။ ပထမဆုံးကတော့ ထုတ်ဖော်ပြောဖို့ပဲ ဥပမာ ပြရရင်
ရုပ်ရှင်ရုံပိုင်ရှင်တွေပေါ့ဗျာ။ တလောကလုံးကလူတွေကို နားလေးတယ်လို့
ထင်နေကြတဲ့လူတွေပေါ့။ (အကျယ်ကြီးဖွင့်တယ်) အသံကျယ်လွန်းတဲ့အကြောင်း သွားပြောလို့
ပြန်ထွက်လာခဲ့ဗျာ။ ဒီလိုလုပ်မှ ဒီလိုလူတွေက နားလည်တာ။ ခလေးတွေကိုလည်း မှာထားပါ။
နားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့က- သီချင်းသံအကျယ်ကြီး နားထောင်ရင်
ကြီးလာရင် နားလေးမယ့်အကြောင်း အိပ်ခန်းကို အသံတိုးတဲ့ဘက် ပြောင်းအိပ်ဗျာ။ အပြင်ကအသံတွေနဲ့ ဝေးရာကို ပြောင်းကြည့် ခင်ဗျားအိမ်၀ယ်မယ်၊ ငှားမယ်ဆိုလည်း ဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုသာ ရွေး။ မနေခင် အရင်လေ့လာ၊
အချိန်တွေခွဲပြီး သွားလေ့လာ၊ အိမ်နီးချင်းတွေကို မေးကြည့်ပါ။ ခရီးသွားရင် နားအကာကွယ်တွေ ဘာတွေတပ်၊ အလုပ်မှာဆူတယ်ဆိုလဲ နားအကာတပ်။ ခြုံပြောရရင် တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာ နေပါ။ ခရီးထွက် အနားယူမယ်ဆို
ဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကို ရွေးပါ။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး
အေးချမ်းပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေး အနားယူပါစေ။ အခုအကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး
ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်က ဂျပန်မှာ ဆူညံသံအကြောင်း
ကွန်ဖရန့်တစ်ခု တက်ခဲ့တယ်၊ အမေရိကားကို ပြန်ရောက်လို့
ဒီလောက်များပြားတဲ့ ဆူညံသံတွေကို လုံး၀ကို သတိမထားမိကြဘူး။ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းဟာ
ဘာကောင်းကျိုးတွေယူလာပေးနိုင်သလဲ လုံး၀ကို မတွေးမိကြဘူး။ ဒီဆူညံသံတွေကို
ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုရှင်းမလဲ။ ကောင်းပြီ ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ အရာတွေကို နည်းသထက်နည်းအောင် လုပ်ကြမယ်လေ။ ဥပမာ ရုံးပိတ်ရက်မနက်မျိုးမှာ
မြက်ရိတ်စက်ကို မမောင်းဘူးဗျာ။ ဒါဆို အိမ်နီးချင်းကလဲ ကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်။ သစ်ရွက်ခြောက်တွေကို
တံမြက်စည်းနဲ့ပဲ လှည်းမယ်ဗျာ။ အရှင်းဆုံးကတော့ ဆူညံတဲ့အရာတွေကို လျှော့ချကြဖို့ပါပဲ။ ထားပါတော့ ကား၀ယ်တယ်၊ အဲကွန်း၀ယ်တယ်၊ အသီးဖျော်စက်၀ယ်တယ်၊ အသံတိုးတာကို ဦးစားပေး၀ယ်ပါ။ အခုဆို စက်ပစ္စည်းအတော်များများမှာ
သူတို့ထုတ်လွှတ်တဲ့ အသံပမာဏကို ဖော်ပြထားကြတယ်၊ ကြေညာထားကြပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေကို ကြည့်ဝယ်ပါ။ တချို့ကတော့ အသံထိန်းချုပ်တဲ့ ဥပဒေတွေက အလုပ်ဖြစ်တယ် ပြောကြတယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်သလောက်တော့ မလွယ်ဘူးဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အချို့လုပ်ငန်းကြီးတွေက ဆူညံနေကာမှပဲ အကျိုးအမြတ်များတာကိုး။ ဥပမာ – လေဆိပ်နဲ့ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့ သုတေသီတွေကလည်း
ဘယ်အခြေအနေမှာ ဆူညံသံဟာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်တဲ့အကြောင်း
ပိုကောင်းတဲ့ ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်လိမ့်မယ် Robert Koch က ပြောခဲ့ဖူးတယ် တစ်နေ့ကျရင် လူသားတွေဟာ ဆူညံသံတွေကို ၀မ်းရောဂါနဲ့ ကြွက်တွေလို လိုက်လံနှိမ်နင်းရမယ် တဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ အခု
အဲ့နေ့ကို ရောက်နေပြီလို့ ထင်တယ်။ နိုင်မယ်လို့လဲမျှော်လင့်တယ်။ ဒီအခါကျရင် တိတ်ဆိတ်စွာ
အောင်ပွဲခံကြတာပေါ့ဗျာ။ (ရယ်သံများ) ကျေးဇူးတင်ပါတယ် (လက်ခုပ်သံများ)
45 thoughts on “Why noise is bad for your health — and what you can do about it | Mathias Basner”
There's also low frequency sounds that can make you nauseous or your heart race – even if we cannot hear them they can still be felt because all sound is vibration.
I am suffering since years of noise,,,i don't go out without my ear protectors .I'm wearing them all the time though ,should I buy noise canceling headphones are the good ?
Alexander Jurrens says:
Person: noise is bad for your health
Me: who got airpods?
Noise-canceling product isasolution to avoid noise stress
– talker : "we can all haveanice, quiet celebration"
– crowd make as many noise as they can with they hands
I thought this was gonna be different and more serious, asaguy living in the suburbs where there is no noise at night and workplace that's relatively quiet, this video barely concernes me.
Also that bs about cancer, diabetes and obesity that has not enough evidence yet….lol
as the man in the video pointed out. noise is unwanted sound. i would like to suggest that we dont do enough internally as people to expect sounds. when you expectasound to exist and accept it as part of the environment, as part of the flow of life, as part of the background, then the noise stops being noise. it becomes ambient sound. just likeariver flowing or the sound of the rain, it no longer stresses you out. i think more people should practice sound acceptance. more people should learn to flow with life rather then against it.
gaymerson dagey says:
Fuckyou and your heavy breathing, ironic how you speak of noise your infernal breathing is noise
Julian Ding says:
Kadircan Aygün says:
None of the solution he mentioned are work for me because I stay in dormitory (and in Istanbul!!!) and you cannot imagine how much noise is there. I cannot sleep some nights and I cannot concentrate on my school works.
Maybe there isalife-saver person who is reading this.
SO C says:
Her Big Nips says:
Is havingafan to create white noise better than not having white noise?
Erhan Aslan says:
Man I always hadatheory that urban noises(like high freq oscillations causing anxiety, many noises overlapping confusing, etc) vs natural would be stressful and overbearing and would have an impact on health. Cool to see
my neighbors need to watch this
This dude seems to be annoyed by sounds.. Not sure why he started to research this. 😉 He got good points though!
No stupid, it’s not sound that is damaging your health it’s the caffeine you’re drinking, you are becoming sensitive to sound and all noise is making you jump or nervous. Stop drinking so much caffeine and you’ll be fine.
Me: nodding along
Also me: lives next to an air force base, private airport, train tracks, busy road, and inastate known for doingalot of construction
I try to have at least 30 minutes of silence when I wake up and before bed.
No screens, cellphones, radio… Just me, my thoughts, andaNotebook.
Merzbow look it up. It's good for you.
James Alexandros says:
I don't work for Sony, it's just blocks all that noise onaprofessional level 👍
Noise can driveaperson crazy. I worry about the young people who listens music right from earphones extremely loud.
4:43 when he said cardiovascular disease his fingers were inaheart shape
My stupids neighbors listen Narco's songs all the day, and closing the streets to throw parties, fucking hate my neighborhood, I don't have enough money so I can't move to another one, there's nothing I wish more thanaquiet peacefully house, for context I live in Latin America
a need to complete silence is just make things worse, it become its own anxiety that disturb sleep.
i use loud white noise from my max speed fan and air purifier. it help me sleep. im yet to aware whether these loud white noise could affect me in bad way.
The people don't know when to speak and when to be quiet anymore.
Yea… welcome to "things we have known for thousands of years".
3:06 Noise has certainly become one of my bigger annoyances. Have you ever tried to takeaquiz withaTV blaring and your mother carrying on what is ultimatelyarather pointless conversation? Notalot of fun.
With that said this wasavery interesting video. Potential health effects aside we can all agree that noise has becomeadaily part of life. We constantly experience noise in our daily journey some of it we enjoy others we don't. Some we find annoying, some we find physically painful, others we simply find surprising and shocking Ig. pneumatic doors onabus, unexpected gunshots, and abrupt yelling inarather silent area. As for stricter policies regarding noise I have to disagree. I simply like my freedom more then I hate the noise we face today.
AE PUBG says:
I think I dislike this presentation.
He seems pretty adamant to connect noise toalot of things, for fucks sakes, he even tried to connect noise to cancer, which he himself said there wasn't enough evidence to prove any connection to most of them … And it just seems heart conditions was the only one he could pin the tail on.
Do I think noise isaproblem? As someone with tinnitus, I'd have to say yes, but I do think he's blowing it out of proportion by basingalot of his claims on the personal feelings of particular subjects rather than scientific fact.